हावा सफा गर्ने ५ विरुवा | आफ्नैबारी
Published on : September 9, 2019 September 9, 2019 by आफ्नैबारी
काठमाण्डौ जस्ता सहरमा हावा सफा छैन। बेला बेलामा हाम्रो राजधानी फोहोर हावा भएको अग्र सहर मध्य पर्ने गर्दछ। व्याक्तिगत तहमा बाहिरी वातावरण शुद्ध पार्न त्यति नसकिएला तर कोठा भित्रको हावा सफा राख्न चाहि हामी केहि प्रयास गर्न सक्छौ।
घर भित्रको वातावरण सफा राख्न गर्न सकिने एक काम हो- फोहोर हावा खिचेर सफा हावा दिने बिरुवाहरु रोप्ने। यस्ता विरुवा घरभित्र गमलामा वा सानो बगैचा जस्तो एरिया बनाएर हुर्काउन सकिन्छ। प्रायः यस्ता बिरुवालाई नियमित प्रकाश पनि चाहिदैन।आउनुहोस घर भित्र हुर्काउन सकिने र हावा सफा गर्ने ५ विरुवाको कुरा गरौं।
१. घ्युकुमारी (एलोभेरा) :
पोलेको ठाउमा उपचारको लागी घ्युकुमारी लगाउन सकिने कुरा हामीले सुनेकै हो। यसको पातमा घ्यु जस्तो बाक्लो रस हुन्छ। यसले पोलेको घाउमा निक्कै फाईदा दिने उपचार हुन्छ। यसको रसलाई काटेको ठाउमा पनि लगाउन सकिन्छ। धेरैले यसलाई नेचुरल मस्ट्युराईजरका रुपमा पनि प्रयोग गरेको पाईन्छ।
औषधिको काम गर्ने घ्युकुमारी वातारण सफा गर्नको लागि पनि निकै उपयोगी छ। यसले formaldehyde and benzene नाम गरेका २ हानीकारक केमिकल कारण (घरको भित्ताको रंग, कार्पेट, पर्दा र टेबुल रंगका कारण) अशुद्ध बनेको वातावरण सफा गर्न निकै प्रभावकारी काम गर्दछ। घटाउन ध्युकुमारीले सहयोगी काम गर्दछ।
घ्युकुमारी (एलोभेरा) सजिलै सप्रन्छ। एउटा बोटले नियमित नयाँ बिरुवा पनि तयार पर्ने गर्दछ। हरियो र मोटो पातमा सेता थोप्ला हुने हुदाँ पनि यो निकै आकर्षक देखिन्छ। कम घाम लाग्ने घरको कुनामा पनि यो राम्ररी हुर्कन्छ। एउटा सुन्दर गमलामा यसलाई हुर्काउन सके घरको शोभा बढने र स्वास्थ्यमा फाईदा हुने कुरामा दुईमत छैन।
२. स्नेक प्लान्टः
स्नेक प्लान्टको नेपाली नाम छैन। स्नेक प्लान्टका बिभिन्न प्रजाति पाईन्छन। नेपालमा पनि एक मिटर सम्म लामो हुने फिका हरियो रंगमा गाढा पाटा परेका स्नेक प्लान्ट पाईन्छन। कतिपय ठाउमा पाईने स्नेक प्लान्टमा पहेंलो बोर्डर समेत देखिन्छ। बैठक कोठा वा बेडरुममा राम्रोसंग सजाउन सकिने यो विरुवाले पनि हावालाई सफा गर्ने काम गर्दछ।
यो विरुवा रातिमा धेरै सकृय हुन्छ भनिन्छ। यसले पनि हावामा रहेको formaldehyde, trichloroethylene, xylene, toluene, and benzene जस्ता हानिकारक तत्वको मात्रा घटाउने काम गर्छ।
यसलाई बेडरुम प्लान्ट पनि भनिन्छ किनभने यो रातिको बेला पनि हावामा रहेको हानिकारक बस्तु हटाउनका लागि काम गरिरहेको हुन्छ। यसले हावा सफा राख्न नियमित काम गर्ने भएकाले एक बेडरुममा ३-४ वटा विरुवा राख्ने पनि चलन बढदै गएको छ।
३. पिस लीलीः
पिस लीलीलाई कोब्रा प्लान्ट पनि भनिन्छ। यसको सेतो रंगको पातले फल लाग्ने सेतो भागलाई कोब्राको शैलिमा आधा ढाकेको हुन्छ। पात भन्दा अग्लो भएर बस्ने त्यो पातले अर्को सानो कोपिला जस्तो फूललाई कभर गरेको पनि निक्कै राम्रो देखिन्छ।
पिस लीलीलाई ईनडोर फूलको रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ। गाढा हरियो र लामा पातहरु भएका हुनाले यो यो भान्छा बैठक, भर्याङ र बेडरुममा जहाँ राख्दा पनि निक्कै सुन्दर देखिन्छ।
पिस लीलीले तपाईको घर कोठामा सुन्दरता मात्र बढाउदैन यसका वातावरणीय फाईदा समेत छन। यसले benzene, formaldehyde, and trichloroethane जस्ता हानिकारक रसायन घटाउन मद्दत गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
४. रबर प्लान्टः
रबर प्लान्ट ईनडोर हुरकाउन सकिने बिरुवा हो। ठुला बिरुवाको चोपबाट रबर बनाईने भएकाले यसलाई रबर प्लान्ट भनिएको हो। यसको बिभिन्न प्रजाति पाईन्छ। घर भित्र राख्नका लागि मिल्ने गरी रबर प्लान्टका साना बिरुवाहरु पनि तयार गर्ने गरिएको छ। यो हावाबाट हानिकारक maldehyde हटाउन निक्कै सहयोगी प्रमाणीत भएको छ। यसले हावामा रहेको bio-effluents पनि हटाउन निक्कै प्रभावकारी देखिएको अध्ययनले देखाएका छन। बिभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनमा रबरप्लान्टले Volatile organic compounds (VOCs) हटाउने पनि काम गरेको देखिएको छ।
तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहि के छ भने रबर प्लान्ट घर पालुवा जनावरको लागि हानिकारक छ। र यसको डाँठबाट निक्कने चोपले पनि नोक्सानी गर्न सक्छ।
तुलसी हाम्रो नेपालको रैथाने बिरुवा हो। यसलाई हाम्रा अग्रजले बिभिन्न औषधिको लागि प्रयोग गर्दै आईरहेका छन। तुलसीको चिया बनाएर खाँदा मात्र यसले स्फुर्ति प्रदान गर्ने र रोग प्रतिरक्षा शक्ति बढाउछ। पिनास, रुधा खोकी र ज्वरोको उपचारमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ। तुलसीलाई हल्का घाम लाग्ने समयमा लगाउन सकिन्छ। तुलसीको मठमा छपक्कै हुर्किएका तुलसी राम्रो देखिन्छ। तुलसी लगाउने मठ छैन भने यसलाई गमलामा पनि रोप्न सकिन्छ।
तुलसीले २४सै घण्टा अक्सिजन प्रदान गर्दछ।
२०० को खर्चमा ३ महिनाका लागि टमाटर।
Previous Previous post: जापानमा पुर्वविमानपरिचारीकाको नेपाली करेसा
Next Next post: के तपाईको बाथरुम सुन्दर पनि छ?